I-china i-Professional 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Action Polisher S25 abakhiqizi nabaphakeli | IChecheng
Usizo lwabenza imisenenzi 150mm 6inch Big Orbit 25mm Dual Action Polisher S25
Into NO.: CHE-S25
I-S25 yethu yenzelwe umsebenzi osindayo wokufaka imininingwane nokupholisha. I-25mm yibanga elikhulu kunawo wonke emhlabeni, ligcina okungenani isikhathi sokusebenza esingu-10% endaweni efanayo ngokuqhathanisa nabanye abapholishi be-DA. Isebenza nomaphi lapho kudingeka khona amandla wokulungisa alinganisiwe ahlanganiswe nokuqedwa kobuso okuphelele. Amandla we-900W anamandla ngamandla ngopende ohlanganiswe kakhulu. Ngaphezu kwalokho, sithuthukise abangaphakathi babafaka kuwo wonke amabombo we-NSK waseJapan futhi saqinisa ikhebula lamandla ukuqinisekisa ukuthi lihlala isikhathi eside. I-gauze yothuli nezimbobo eziningi zokungenisa umoya zingeziwe emzimbeni womshini ukuvimbela ukushisa okwakhiwe. Inhlamvu eqhubekayo ngokulawulwa kwejubane nomsebenzi wokuqala othambile kwenza ukusebenza kuphephe futhi kube lula. Isilawuli sejubane esisebenza ngesithupha sinikeza ukulawulwa kwejubane okuguquguqukayo kusuka ku-0 kuye ku-4800 OPM, ngeke kwandise umsindo ngenkathi kuqinisekiswa ukusebenza kahle komsebenzi. Nge-S25 yethu, yenza umsebenzi wokucwebezelisa onzima usebenze kahle futhi ubelula.
1.The enkulu 25mm ibanga ome njengeqanda emhlabeni. Uma kuqhathaniswa namanye ama-polisher orbital, igcina i-10% ebusweni obufanayo.
I-4.Ine-plate esheshayo yokupholisa esheshayo evikela umshini ukuthi ungashisi.
I-5.A enamandla ye-900watt isusa ngempumelelo ukukhubazeka ngokushesha.
I-gauze engu-6.Uthuli ukuvimbela uthuli ohlelweni lokujikeleza komoya, oluvikela imoto ekulimaleni.
Isivinini se-7.Constant esine-soft start function.
8.Soft iraba ukubambelela camera futhi isibambo, ngokunethezeka.
Amachweba ohlangothini we-carbon brush enza abasebenzisi kube lula ukushintsha i-carbon brush.
Langaphambilini Ikhwalithi ephezulu ye-21mm Dual Action Car Orbital Random Polisher S21